Home Wararka Wajiga sadaxaad ee doorashada Aqalka Sare ee Hirshabeelle oo dhawaan bilaabanaysa
Wajiga sadaxaad ee doorashada Aqalka Sare ee Hirshabeelle oo dhawaan bilaabanaysa
Wajiga sadaxaad ee doorashada Aqalka Sare ee Hirshabeelle oo dhawaan bilaabanaysa. Doorashada Kursi ka mid kuraasta Aqalka Sare ee laga soo doorto Hirshabelle. Kursigan oo ka mid ah kuraasta sida adag loogu tartamayo ayaa waxaa ku tartamaya saddex Musharax oo kala ah Prof Cismaan Dufle oo difaacanaya Kursiga, Raagge Xasan Xuuti iyo Safiir Maxamuud Tarsan.
Waa kursigii afaraad oo xilli habeen ah lagu dooranayo magaalada Jowhar, iyadoo Dowlad Hirshabelle ay soo bandhigtay doorasho daah furan oo aan wali dowlad goboleedyada kale ka dhicin. Xalay ayaa waxaa lagu doortay saddex kursi isla goobta ay ka dhacayso doorashada caawa.